Wakaaladaha socdaalka ayaa mudaaharaaday: Hadalkii Wasiirka Dalxiiska Talyaaniga oo marin habaabin ahaa
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Italy War Deg Deg Ah » Wakaaladaha socdaalka ayaa mudaaharaaday: Hadalkii Wasiirka Dalxiiska Talyaaniga oo marin habaabin ahaa
Jebinta Wararka Caalamka • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Italy War Deg Deg Ah • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Wasiirka Dalxiiska Talyaaniga oo wanaagsan oo faraxsan
“Xilligu si fiican ayuu u socdaa, carwooyinkii iyo shirweynihii ayaa dib u bilaabmay. Ma bixin doono lambarada, laakiin waxay noqon doontaa xagaaga cajiibka ah, oo u dhow 2019, haddii aysan ka baxsanayn xaaladaha qaarkood. Marka la soo koobo, xilli aad iyo aad u wanaagsan. Waxaan durbaba fiirineynaa jiilaalka, si aan u oggolaanno xilli nabdoon, oo aan joodar lahayn. ” Sidaas waxaa yiri Massimo Garavaglia, Wasiirka Dalxiiska ee Talyaaniga, kulanka Rimini.
Adeegsiga ereyada sida cajiibka ah, nabdoon, iyo togan ma ahayn waxa wakiillada socdaalka ee Talyaanigu doonayeen inay ka maqlaan Wasiirkooda Dalxiiska.
Ka dib markii uu wasiirku soo bandhigay aragtidiisa wanaagsan ee dalxiiska dalkiisa, wakaaladaha socdaalka ayaa maqlay war ku filan waxayna u direen warqad cabasho ah.
Si kooban, Dhaqdhaqaaqa Madaxbannaan ee Wakaaladaha Socdaalka Talyaaniga ayaa u sheegay Wasiirka Dalxiiska, "Tani run ma aha."
“Taariikh ahaan,” ayuu raaciyay Wasiirka, “Dalxiisku wuxuu qiimihiisu yahay 14% GDP, laakiin wuxuu gaari karaa 20%. Maaha waalli. Waxaan leenahay karti weyn. Laakiin waxaan u baahanahay waxyaabo qaar: tusaale ahaan, qorshe guud ee cuntada iyo khamriga. Markaa waa inaan higsanaa inaan helno 60 ITS (Machadka Farsamada Sare ee ardayda Dalxiiska) sida Spain. Urur ahaan ugu yaraan waxaan ku kasban karnaa saamiga suuqa. ”
Mudaaharaadka MAAVI, (Dhaqdhaqaaqa Hay'adaha Socdaalka Talyaaniga)
Marka la eego D-Dayga saddexaad, oo ah maalinta sharafta leh, ayaa la isugu yimid 8-dii Sebtember 10:30 Piazza del Popolo ee Rome, Guddoomiyaha Ururka Wakaaladaha Socdaalka, Enrica Montanucci, ayaa u diray mudaaharaad rasmi ah Dalxiiska Talyaaniga Wasiir Massimo, oo marti ku ahaa kulanka Rimini 2021 oo u dabaaldegay xagaaga dalxiiska Talyaaniga xilli rikoor ah.
Waraaqda uu Wasiirku u diray Marwo Montanucci ayaa u qornayd sidan.
"Mudane Wasiir Garavaglia:
“Waxa aad ku dhawaaqday Rimini gabi ahaanba waa wax aan la aqbali karin dhammaan qaybaha wakiilada safarka Talyaaniga. Haddii 'xilli ku dhow heerarka 2019' waxaad ula jeeddaa dadka, oo aan awoodin inay meel kale aadaan, ku shubtay Goobaha dalxiiska ee Talyaaniga, siinta, ugu yaraan falanqayntii ugu horraysay, aragtida ah in wax walba ay ku soo noqdeen sidii caadiga ahayd ee caadiga ahayd, markaa waxa laga yaabaa inaan sidoo kale kugu raacno. Xeebaha buuxa, hudheelada buuxa, dadka ku xeeran… oo ku dayashada midabka leh ee farxadda xagaaga ee aan caleenta lahayn.
“Tani run ma aha.
Qof kasta oo u shaqeeya wakiil safar ahaan ganacsi wuxuu arkay dad aad u badan oo dhex maraya xafiisyadooda, oo la iibiyay (si xun iyo dhibaatooyin ay ugu wacan tahay kalsooni -darro iyo caddeyn la’aan xog) meelo badan oo Talyaani ah oo la dagaallamaya boos -celinta internetka, oo leh hudheelo khiyaano leh oo leh inta badan wuxuu isku dayay inuu si toos ah u gaaro macaamilka, macaamiisha cabsan oo aan ku qanacsaneyn, sicirrada aad loo garaacay, iyo in ka badan. Hoteelada oo buuxa micnaheedu maahan in dalxiiska uu soo kabanayo.
“Adduunkeenna, kan wakaaladaha socdaalka oo shaqaaleysiiya 80,000 oo qof, oo sanado badan si qarsoodi ah cashuurta u bixin jiray oo aan waligood waxba weydiisan, ayaa ku jira dhammaadka khadka. Waxaan la kulannay xagaaga oo aan lahayn meelo ka baxsan Yurub, waxaan aragnay mugga u dhigma 35% sannadka 2019, oo tixraacaya kaliya bilaha xilli-sare. Qaadashada… Janaayo/Julaay, celceliska hoos udhaca waa 90%. Asal ahaan, waxba isma beddelin.
“Waxaan aaminsanahay xamaasaddaada, laakiin waxaan kaloo aaminsanahay in mustaqbalka aan wajahayno uu u baahan yahay taageero muhiim ah oo ay tahay in loo qoondeeyo si degdeg ah. Sababtan awgeed, waxaa laga yaabaa inay tahay mid khatar ah oo aan faa iido badan u lahayn in la baahiyo bayaannada beenta ah.
“Haddaba, laga bilaabo MAAVI, waxaa laguugu soo gudbinayaa codsiga lagu xaddidayo adeegsiga warbaahinta ee waxyeellada iyo marin habaabinta ah, si aad u dhegeysato qaylada 'xanuunka iyo quusta' ee wakiillada socdaalka iyo, saaxiibbada, rafcaanka ku soo noqoshada waddooyinka Bishii Sebtembar 8. Aad iyo aad bay uga sii dagaal badan tahay markii ugu dambaysay ee ka soo horjeeday qaylo -dhaanta hay'adaha, 'Ereyo ku filan. Waxaa la joogaa waqtigii xaqiiqooyinka. '”
Francesco wuxuu leeyahay,
Ogosto 25, 2021 markay tahay 01:51
Nasiib darro magaalooyinka farshaxanka sida Rome waxaan ku seegnay kooxaha iyo dalxiisayaasha yurub-dheeriga ah.